Aan idhaahdee: Waa la kufsaday | isbeddel
← Xilkaqaadista Guddoomiyihii Maxkamadda Racfaanka: Qarannimo mise Qabyaalad
Ragoow kibirka waa lagu kufaaye, taana ha la ogaado →
Aan idhaahdee: Waa la kufsaday
In cay iyo canaan u joog uun la ahaadaa ma habboona, waxa kale oo aan habboonayn in laga hadlo arrin aan waxba laga qabanayn. Laakiin haddana waa bilaa-dhiignimo haddaad ka dhalaali weydo foolxumooyinka aad aragto! Alla weliba foolxumooyinku ku badanaa bulshadeenna!
Mid ka mid ah foolxumooyinkaas, oo qof kasta oo wax akhriyaa maalin kasta la kulmo, ayaa ah ta saxaafadda Soomaalilaan iyo Soomaalidaba guud ahaan. Kollay hore waad ugu fiirsateene, saxaafadda dalka waxa gala uun inta ka saaqidda waxbarashada tooska ah. Intii ugu liidatay xagga fahanka, aqoonta iyo garashada dabiiciga ah, iyo intii ugu hoosaysay wacyiga dunida iyo wacaasha ummadda ayaa isu urursatay. Waxa kaaga daran, waa wada dhallaan aan if iyo aakhiro toona war u hayn. Waxay doonaan bay qorayaan oo siday doonaan bay u qorayaan! Ma sheegayo kuwa yidhaahda maqaal baan qoraynnaa ee sidii wax ay xadiis tahay ku wada bilaaba “marka hore waxaan salaamayaa dadweynaha reer somaliland meel walba ay joogaan marka danbe na waxaan salaamayaa shabakada caalamiga ah ee …” Woof! Hadda waa tabtaa, xaraf kamaan beddelin oo maantadan ayay meel baas sidaa kadeedan ugu qornayd! Kuwaasi iyagu saxafiyiin ma sheeganayaan ee waa muwaaddiniin qiirooday, waxaan sheegayaa kuwa magaca SAXAFI/SUXUFI tuurta u ritay…Ama aan dhiirradoon idhaahdee: KUFSADAY.
Shaqada saxaafaddu waxay dalkeenna noqotay shaqooyinka ugu riqiisan uguna xansaska iyo xaabada badan ee cid walba sida dhikhsaha dalam iska tidhaa. Waa sax oo way innagu cusub tahay, waana sax oo xorriyad aan la qiyaasi karin ayay saxaafaddu dalkeenna ku leedahay… Mid la is illowsiinayo ayaase ah, in ay tahay awoodda afraad ee ummadaha, sida ay yidhaahdaan. Midda kale ee la is illowsiinayaana waxa weeyi in ay tahay aqoon sideeda u taagan oo, sida cilmi kastaaba yahay, leh mabaadi’deeda iyo taariikhdeeda. Maaha khasab in aan saxaafad barto si aan u noqdo SAXAFI, waxa se khasab ah in aan leeyahay aqoon tayo leh oo aan ku hago mabda’a aan aaminsan ahay ama aragtida aan u adeegayo. Tusaale ahaan, haddii aan ahay saxafi wax ka qora Arrimaha Bulshada, waa in aan leeyahay aqoon xooggan oo Cilmiga Bulshada ah (Sociology) ama khibrad buuran oo aan ku salayn karo qoraalladayda/warbixinahayga; sidoo kale haddaan ahay saxafi wax ka qora Arrimaha Ictiraaf-raadinta Soomaalilaan, waa in aan haystaa aqoon igu filan oo ah taariikhda dunida, siyaasadda, arrimaha Geo-strategy ga, xidhiidhka caalamiga ah iyo qawaaniinta caalamiga ah.
Saxaafaddu in aanay sahlanayn saddexdan tusaale bal eeg:
1. Ra’iisal Wasaaraha Pakistan, Yuusuf Ridaa Jaylaani, waxa uu bartay Saxaafadda.
2. Markii uu shaqada ka tagey Ra’iisal Wasarihii hore ee Ingiriisku, Tony Blair, shaqooyinka la saadaaliyey in uu qaban doono waxa ugu horraysay in uu tifaftire ka noqon doono mid ka mid ah jaraa’iiddada ugu waaweyn Ingiriiska (Waxa aan ka faa’iiday ogaalkan aqoonyahan Xasan Ciise).
3. Cabdulxaliim Qindiil, waa saxafi Masri ah waana nin shacbiyad badan ku leh Masar ilaa ay dad badani yidhaahdaan waa ninka keliya ee Islaamiyiinta, Qawmiyiinta iyo Naasiriyiinta Masar isu keeni kara. Hadda waa ‘Saxafi’!
Laakiin nasiib darro teennu waxbaba ma xeeriso, waxa laga dhigay magac lagu xammaasho oo weliba si liidata loogu noolaado. Sidaa darteed ayaa arday badan oo dugsigayada Soomaalilaan ka soo baxaa ugu haystaan wax aan uba baahnayn in la barto. Tayo xumadeedu waxa uu ka turjumayaa tayo xumada bulshadeenna; sidaa ay u habacsan tahay uun buu garaadka muwaaddinkuna u habacsanaanayaa. Laakiin tolow heerka saxaafadda ee dalkeenna kor ma loo hinjin karaa iyada oo bulshadu sidan u tabar daran tahay? Maxaaba horta ku jaban haddii la iskaba daayo oo sidan la iskaga booshaalaysto? Adaan kuu daayay.
Posted by Warfaa on Seteembar 10, 2011 in Uncategorized